Serivisy mailaka tsotra Amazon (Amazon SES) - SMTP ao amin'ny rahona
Talata, Febroary 1, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Adam Small
Amin'ny maha mpampiasa an'i Amazon Web Services, Indraindray aho mahazo mailaka avy amin'izy ireo izay manambara serivisy vaovao na manasa ahy handray anjara amin'ny beta na hafa. Tamin'ny herinandro lasa aho dia nahazo mailaka nanambara Serivisy mailaka tsotra Amazon.
Amazon SES dia fitaovana fampiroboroboana voalohany. Natao manokana ho an'ireo izay maniry ny hamorona ny rafitra mailaka / fanaterana mailaka azy ireo mifanohitra amin'ny fampiasana ny sehatr'asa Mpanome Tolotra Email (ESP). SMTP amin'ny rahona io amin'ny ankapobeny. Amazon dia mamela ny mpamorona handefa hafatra mailaka amin'ny alàlan'ny mailaka am-pelatanany, amin'ny vidiny kely dia kely. Mampanantena ity serivisy ity fa hesoriny ny enta-mavesatra amin'ny fandrefesana, ny fikirakirana ny mpizara mailaka, ny fitantanana laza IP Address, ny fisoratana anarana amin'ny ISP Feedback loop ary ireo olana eo amin'ny fotodrafitrasa hafa mifandraika amin'ny fahaterahana sy fandefasana mailaka be. Ny zavatra tsy maintsy atahoran'ny mpamorona dia ny famoronana ny mailaka (html na lahatsoratra tsotra) ary ampitaina any Amazon mba halefa.
Betsaka ny mpanome tolotra mailaka (ESPs) no manolotra Application Programming Interfaces (API) izay azo ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'izany nefa miaraka amin'ny tsy fahamaroan'ny skotera Amazon Web Services ary maodely iray momba ny vidiny izay, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia mahomby kokoa amin'ny vidiny kokoa noho izy io. manontany tena ianao hoe inona no ho vokatr'ity serivisy ity eo amin'ny tsenan'ny Mpanome Tolotra Email. Maniry mafy ihany koa aho ny hahita ny isan'ny ESP fanampiny izay hanomboka amin'ny Amazon SES ho fototr'izy ireo - izay mety hiteraka olana amin'ny indostrian'ny serivisy mailaka be tombony.
Mieritreritra ve ianao fa hisy fiatraikany amin'ny ESP ny Amazon SES? Ary ahoana ireo izay miara-miasa amin'ny orinasa lehibe ary mandoa sarany be mba hidirana amin'ny API misy azy ireo?
1 Mey 2011 tamin'ny 3:48 hariva
Niresaka tamin'ny olona sasany ao amin'ny indostria aho izay tena mino fa izany dia mety ho kapoka ho an'ireo mpanome tolotra mailaka lehibe izay manao asa OEM iray taonina. Tsy azonao atao tsotra izao ny mandaitra kokoa noho ity serivisy ity - na dia mila manakarama consultant amin'ny fanaterana entana any amboniny aza ianao!
1 Mey 2011 tamin'ny 6:57 hariva
Ny sakana tokana hanombohana ny ESP anao manokana dia ny volabe sy ny tahan'ny Amazon quota napetraka. Na ny salan'isa isan-tsegondra sy ny totalin'ny fandefasana isan'andro dia voafetra mandra-panehoanao ny tantaran'izany filàna izany. Azonao atao ny tonga amin'ny fotoana ahafahanao mandefa mailaka an-tapitrisany isan'andro nefa mila fotoana fohy izany. Ny ESP vaovao dia mety ho tsara kokoa amin'ny rafitra hybrid an'ny SMTP anatiny sy ny serivisy Amazon mandra-pahatonga azy ireo hanana onjam-peo tsy miova. Raha tsy izany dia mety hipoaka ambony noho ny quota avela izy ireo.
21 Mey 2011 tamin'ny 10:12 hariva
Tsy mila ESP izy ireo, mieritrereta aloha fa ho ilay manam-pahaizana manokana no manangana azy io ho mpivarotra mailaka arahin'izy ireo